बर्मामा बौद्ध धर्मको सम्बन्ध र इतिहास - Nepal Buddhist News
जुन 25, 2020 जुन 25, 2020 rinpoche
नेपालमा थेरवादी बौद्ध धर्मको स्थापना, प्रचार र प्रचारमा पनि बर्माको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपालका सुरुआती समयका प्रमुख भिक्षु र भिक्षुणीले बर्मामै बौद्ध धर्मको अध्ययन गरेका थिए । बर्मामा अध्ययन गर्नेहरुको सबैभन्दा ठूलो उद्धाहरण धम्मावती गुरुमा हुन् । अहिले पनि बर्मामा गएर बौद्ध धर्मको अध्ययन गर्ने परम्परा कायम छ । बर्मामा करिब ८० प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन् ।
पाकिस्तानमा रहेको यो बौद्ध स्तुप किन विशेष मानिन्छ ?
जुन 27, 2020 rinpoche 0
भन्ते नागसेन ! तपाईंहरु भन्नुहुन्छ कि भगवानले जे कुराहरू गर्नु थियोे सबै बोधीवृक्षको मुनि नै समाप्त...